« Mihira foana » roa andro misesy: hiaka-tsehatra ry Tsiakoraka, Abel Ratsimba… | NewsMada
« Mihira foana » roa andro misesy: hiaka-tsehatra ry Tsiakoraka, Abel Ratsimba…
Hiavaka ny amin’ity indray mitoraka ity ! Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny hetsika « Mihira foana » ny fampiakarana an-tsehatra tarika sy mpihira manana ny maha izy azy, ao anatin’ny roa andro misesy, eny amin’ny Karaoke 411 Avarajoezoro Ambatolampy Tsimahafotsy. Ny asabotsy 27 novambra, manomboka amin’ny 7 ora hariva, tarika Tsiakoraka. Ny alahady 28 novambra, amin’ny 2 ora tolakandro, i Abel Ratsimba sy ny Diantana Mozika.
« Hampatsiahy ny « hiran’ny Tamboho » ny tarika Tsiakoraka. I Abel Ratsimba kosa hikalo ny « Fitia » tsy ahafoizan’ny maro azy hatramin’izay, hotronin’ny Diantana Mozika, izay manome lanja ny hiran’ny omaly malagasy, amin’ny fanafanana lanonana tahaka izao », hoy ny tomponandraikitry ny « Mihira foana ».
Fantatra fa hanakoako eny an-toerana avokoa ireo hira tsy afaka am-bavan’ny olona maro, sanganasan’ny tarika Tsiakoraka (Misy misioka any an-tokotany any …sns) sy ny an’i Abel Ratsimba (Samy tia isika izao …, sns).